Mpanamboatra bokotra China, teny nalaina namboarina - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Home >Products >Bokotra
Ny bokotra TS efatra-snap dia karazana bokotra, fantatra amin'ny anarana hoe snap, bokotra lohataona, bokotra fanjairana. Ny tadim-borona efatra-snap dia ampifandraisin'ny lohataona S, izay mizara efatra amin'ny ABCD hatrany ambony ka hatrany ambany.
Ny buckle cowboy dia misy ny bokotra ambony (sombiny A) sy ny hoho ambany (tapa-B). Ny fizarana roa dia ampiarahan'ny mode percussion. Satria ny endrik'ilay tsikombakomba dia mitovy amin'ny endrika sinoa "gong", dia nahazo ny anarana hoe "I character buckle", fantatra koa amin'ny hoe "buckboy buckle".
Bokotra hazo zana-kazo
Ny bokotra famoronana sary miaina dia sahisahy, bokotra hazo haingon-trano, tsara tarehy sy mora ny endriny madio. Ireo fitaovana voajanahary madio dia mampiasa fitaovana fiarovana tontolo iainana, mety ho an'ny ankizy, ny fikatsahana ny toetra sy ny kalitao, mahomby, fomba lamaody, fampiasa be, lava- stock stock, be dia be avy amin'ny tombony!
Ny perla fanahafana dia vita amin'ny vakana fitaratra, vakana plastika, vakana akorandriaka na baolom-baravarana lavaka feno savoka, mifono foil amam-borona na vovoka perla, sns.